'डिजाइन भनेको घरको रूपमात्रै होइन'प्राडा गोकर्णबहादुर मोत्रा 'स्ट्रक्चरल इन्जिनियर' हुन्। उनी यतिबेला उपत्यकामा रहेका भौतिक संरचनामा महाभूकम्पपछि पुगेको क्षति अध्ययन गर्ने टोलीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। 'वैशाख १२ मा आएको भूकम्पको क्षति अध्ययन, अनुसन्धान तथा...	उज्यालो/अँध्यारो हङकङसन् १९४० देखि नै नेपालीहरू हङकङमा बस्न थालेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र हङकङ धेरै नेपालीको सपनाको शहर पनि हो। यहाँका नेपालीले देशका लागि आफ्ना तहबाट मनग्गे योगदान गरिरहेका छन्। नेपाली...	जितुले कपिलको नक्कल गर्नेभारतको चर्चित टीभी शो 'कमेडी नाइट्स विद कपिल' बाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि यस्तै एक शो सुरु हुने भएको छ। हास्यकलाकार जितु नेपालले 'कमेडी क्लब विद जितु नेपाल' शो चलाउने...	व्यङ्ग्य : हर्ष न बिस्मात्कामरेड विप्लप प्रश्नहरूको घेरामा हुनुहुन्थ्यो। यो स्वाभाविक पनि थियो।
'कामरेड अबको बाटो कता?' पहिलो प्रश्न थियो।
'क्रान्तितर्फ। साँच्चै भन्नुपर्दा निरन्तर क्रान्तितर्फ।'	जे छ सरकारीमै छ!
डा.रवि शाक्य सूचना–प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै मानिसको जीवन जति सहज बनेको छ, त्यति नै जटिलता पनि थपिँदै गएका छन्। सूचना–प्रविधिले मानव जीवनमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। तर, यसका कारण सिर्जना भएका समस्या र भविष्यमा यसले पार्ने असरबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि भइरहेका… विस्तृतमा
जीवन पुडासैनी लोडसेडिङ एपएफ वनसफ्ट कम्पनीको मोबाइल एप्लिकेसन विभागले बनाएको लोडसेडिङ एपले नेपालीको दिनचर्यालाई केही सहज बनाएको छ। समूहअनुसार बत्ती जानुभन्दा १५ मिनेटअघि सूचना दिने यो एपले दैनिकी सहज बनाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सजत श्रेष्ठले बताए। आठ लाखभन्दा बढी डाउनलोड गरिसकिएको… विस्तृतमा
नागरिक के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल? केही दिनअघि मात्रै नयाँ एल्बम ‘मिम्जिमा' अर्थात् ‘प्रेयसी' बजारमा ल्याएको छु। त्यसैको प्रमोसनमा लागिरहेको छु। निकै ग्यापमा नयाँ एल्बम ल्याउनुभयो है? पाँच वर्षअघि ‘धानै नाचिन्छ' बोलको गीत ल्याएको थिएँ। आफ्नो स्वर कच्चा लाग्यो। त्यसपछि संगीत अध्ययनमा… विस्तृतमा
StartPrev…NextEndPage 26 of 113	भर्खरै...